Programme PROSPERER » SEHA-PIHARIANA TSARA SY MAHAVELONA NY FIOMPIANA TANTELY SEHA-PIHARIANA TSARA SY MAHAVELONA NY FIOMPIANA TANTELY – Programme PROSPERER
SEHA-PIHARIANA TSARA SY MAHAVELONA NY FIOMPIANA TANTELY
RANDRIAMAHAROMANANA Anjarasoa, 28 taona, manambady ary mana-janaka iray, mipetraka ao amin’ny fokontany Ambodivona, Kaominina Anjepy, distrika Manjakandriana, faritra Analamanga dia tanora misehatra amin’ny seha-pihariana tantely.
12 isa no vata tantely maoderina nananan’i Njara tamin’ny nanombohany niompy ny taona 2008. Nitombo avo roa heny isan-taona ny isan’ny vata nampiasaina izay vata azo avy amin’ny herin’ny tenany manokana.
Nisedra olana izy ny taona 2010 nohon’ny fahatongavan’ny aretina varroas nandripaka ny tantely tamin’ny faritra rehetra ka anisany voa tamin’izany ny seha-pihariana ary tsy nisy tantely intsony.
Ny taona 2011 dia tsy kivy ny mpandraharaha fa niezaka nanarina tsikelikely ny tantely ka nampiasa ireo karazana fitsaboana niadiana tamin’ny aretina varroas.
Ny taona 2015 no nanomboka nahazo tohana tamin’ny Fandaharanasa FANOITRA izy tamin’ny alalan’ny fampifandraisana ara-barotra tamina mpandraharaha ka nahazo fifanarahana hivarotra tantely. Teo ihany koa no nahafahany nanampy hatrany ireo vata ka nahazo vata tantely maoderina miisa 20 izy tamin’ny alalan’ny vidiny hifampizarana na ny Fond de Financement à Coût Partagé izay ny 50 isan-jato iantohan’ny Fandaharanasa ary ny 50 isan-jato kosa no anjaran’ny mpahazo tombotsoa.
Nahazo ny fiofanana mahakasina ny fitantanana seha-pihariana madinika sy kolontsaina mpandraharaha izy tamin’izany ka nanatsara ny asa fihariany ary nanampy azy tamin’ny fikajiana ny mason-karena sy ny tombony azo amin’ny fiompiana tantely.
Amin’izao fotoana izao dia nahazo fifanarahana ara-barotra amina mpaka vokatra indray izy ary inoany fa tena aharitra sy matotra ity fiaraha-miasa ity satria efa hita taratra ny vokatra azo ary maharitra roa taona azo havaozina ny faharetan’ny fifanarahana ara-barotra
Ankehitriny dia miisa 95 ny vata maoderina ananany ka miparitaka amina tranon-tantely miisa valo dia 2 ao Ambohitravao, 2 ao Soamalaza, 1 ao Miarina, 1 ao Anjepy ary 2 Ambodivona.
Mampiasa olona mpanampy izy manomboka ny volana marsa ka hatramin’ny volana oktobra izay karamainy 5 500 Ariary isan’andro mandritra ny 24 andro ao anatin’ ny valo volana. Mamokatra mamitantely 760 litatra isan-taona izy izay raisin’ny orin’asa avokoa ny vokatra amin’ny vidiny 14 000 Ariary ny iray litatra.
Tsapan’i Njara fa nivoatra ny asa fihariana nataony tamin’ny nahazoany tohana tamin’ny Fandaharanasa FANOITRA ary efa azo lazaina fa efa voafehiny ny tekinika rehetra amin’ny fiompiana tantely.
Marihina fa ny traik’efa azo dia nolovainy avy tamin’ny rainy izay mpiompy naharitra teo an-toerana ihany koa.
Amin’izao fotoana izao dia mampita ireo traik’efa ananany amin’ireo mpiompy namany i Njara satria mitovy ny tanjona dia ny hanatsara ny seha-pihariana tantely mba ho matihanina ny mpiompy ka ho afaka mivelona maharitra amin’izany.
« Io fiompiana tantely io » hoy Njara « no tena antom-pivelomako sy fototr’asako ary tena mahavelona sy ahafahana manangan-javatra rehefa manaja ireo fepetra rehetra takian’ny tsena »
Tamin’ity taona 2019 ity dia miisa 30 ny mpiompy tantely ao amin’ny kaominina Anjepy resy lahatra niditra ao anatin’ny fifanarahana ara-barotra izay tohanan’ny Fandraharanasa FANOITRA ka manana vata tantely maoderina miisa 870 ireo mpiompy tantely ireo.
Inoana sy antenaina fa hitombo hatrany ny mpisehatra hiditra amin’ny varotra matihanina ka hanitatra ny seha-pihariana fiompiana tantely hampitomboana ny fidiram-bolan’ny tokan-trano sy hanatsarana ny fari-piainana andavan’andro.
Ny vomanga mavo aty entina iadina amin’ny tsy fanjarian-tsakafo
Mba ho fandraisana anjara amin’ny Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia nisy ny fanohanana miampy fiofanana mikasika ny famokarana Vomanga mavo aty na patates douces à chair orange (PDCO) natao tao Mandrosoa Ambohimandry sy Ankonabe Analavory izay fiaraha-miasa teo amin'ny Fandaharan'asa PROSPERER Itasy sy ny FIFAMANOR (toby fikarohana eo ambany fitantanan’ny MAEP manana traik’efa manokana amin’ny…
Le Taro de l’Itasy
C'est la saison de récolte de #Taro actuellement à Mandrosoa CR Ambohimandry District #Arivonimamo. La coopérative TAMAMI, structure paysanne productrice de Taro, a connu une saison meilleure en terme de récolte, tant sur le plan qualité que quantité. Les appuis du Programme #PROSPERER ont contribué à l'atteinte de ces résultats parallèlement avec la motivation des membres de développer une…